MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: KIA, တပ်ရင်း (၁၂)့ (၂၇)တို့တွင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်၊ အစိုးရတပ်မှ(၅)ဦးကျ
ထို့ အပြင် KIA, တပ်ရင်း (၂၇) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ဖြစ်သော ကောင်းဂျာ ရွာသို့ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာ ကာ ကောင်းဂျာရွာ အတွင်းလာရောက် စခန်းချနေ သော မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (ခ.လ.ရ-၄၇ နှင့် ၅၆) တပ်မှ စစ်ကြောင်း နှင့် KIA, တပ်ရင်း (၁၂) တပ်ဖွဲ့ တို့ အကြား( နိုဝင်ဘာလ၊ ၉ ) ရက်နေ့ နံနက် (၇း၀၀)နာရီအချိန်ခန့် မဟော်ယန် ရွာ အနီးတွင် တိုက်ပွဲ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပြီး တိုက်ပွဲ အတွင်း နှစ်ဘက်စစ်တပ်တို့၏ ထိခိုက်မှု အသေးစိတ် သတင်းမသိရှိသေးပါ။
KIA, Dung (12)aBawm Hta Mye (5) Si Hkala
KIA Masat (12) Dap Dung ginra, Nam Gau mare kawn pru wa ai Myen asuya hpyen Hk.M.Y (320,438) Dap na hpyen hpung hte Dung (12) Dap na hpyen hpung ni, Nov,9ya jahpawt hkying (5:45)am ten gasat poi byin ai lam na chye lu ai.
Masat (27) Dap Dung ginra, Kawng Ja mare kaw shara jahkrat nga ai Myen asuya hpyen Hk.L.Y (47,56) Dap na pawng hpawm hpyen hpung hte KIA hpyen hpung ni, dai hpawt hkying (7:00)am aten hta Mahkaw Yang mare hte Nam Hpu lapran kaw gasat poi byin ai lam na chye lu ai.
Shana maga hkying (1:00)pm aten hta Mungding Pa grup yin shamu shamawt hkawm ai Myen asuya hpyen Hk.L.Y (236) Dap na hpyen hpung hpe KIA hpyen hpung ni, bawm majan hte hkap shingla gasat ai hta, Myen asuya maga na marai (5) hkala hkrum ai lam na chye lu ai.
at 11/11/2013 09:13:00 AM